အိမ်​​ထောင်​ပျက်​တဲ့ဒဏ်​​ကြောင့်​ စိတ်​ဓာတ်​ကျခြင်းဝေဒနာကို အကြီးအကျယ် ​​​ခံစား​နေရတဲ့ ​ဆောင်း​ဟေကို…. - Myannewsmedia
စိတ်​ထိခိုက်​စရာသတင်းတစ်​ခုဖြစ်​တဲ့ မင်းသမီး ​ဆောင်း​ဟေကိုရဲ့ လတ်​​တ​လော အိမ်​​​ထောင်​​ရေး​သောကမီးဟာ အခုအချိန်​မှသာ ပရိသတ်​​တွေသိရှိခွင့်​ရခဲ့​ပေမယ့်​ အိမ်​​ထောင်​​ရေးဘဝမှာ ဘယ်​လိုအချိန်ကတည်းက ဘယ်လိုအခက်​အခဲ​ပြသနာ​တွေနဲ့ လှိုက်စား​​နေခဲ့သလဲ ဆိုတာ ကာယကံရှင်​​တွေကလွဲပြီးဘယ်​သူမှအတိအကျမသိရှိနိုင်​ပါဘူး။
လက်​ရှိအချိန်​ မင်းသား ​ဆောင်​ဂျုံကီနဲ့ အိမ်​​ထောင်​ကွဲရအဖြစ်​ကို လူသိရှင်​ကြားဖြစ်​​စေခဲ့ပြီး​နောက်​ပိုင်း စိတ်​ဒုက္ခနဲ့ ဖိစီးမှုဒဏ်​ ကြုံ​တွေ့ခံစား​နေရတဲ့ မင်းသမီးဟာ စိတ်​​ရောရုပ်​ပိုင်းပါ ထိခိုက်​ကျဆင်းပြီး ကိုယ်​အ​လေးချိန်​ ၅ ကီလိုကျလို့ ပိန်​ကျသွားတယ်​လို့ ​ဒေသခံသတင်းမီဒီယာတစ်​ခုက ​ဖော်​ပြသွားခဲ့ပါတယ်​။
” ​ဆောင်း က နဂိုအရကိုစကားနည်းပြီး ကိုယ့်​ခံစားချက်​​တွေကို ​ပြောပြ​လေ့မရှိတဲ့သူပါ။ အခုချိန်​မှာ​တော့ သူ့ရဲ့ အိမ်​​ထောင်​​ရေးပြသနာကို ​ထုတ်​​ပြောပြတိုင်း စိတ်​ထိခိုက်​ပြီး ​ငို​ကြွေးခံစား​နေရပါတယ်​ ” လို့ အဲ့ဒီ သတင်းက​နေ ​ဖော်​ပြသွားခဲ့ပါတယ်​။
တစ်​ဆက်​တည်းမှာပဲ ​ဆောင်း​ဟေကိုဟာ ယခုနှစ်​စပိုင်းကတည်းက ခန္ဓာကိုယ်​ပိန်​ကျသွားပြီးလက်​​ချောင်း​တွေ​သေးသွားခဲ့တာ​ကြောင့်​ လက်​ထပ်​လက်​စွပ်​​တောင်​ ​ချောင်​သွားလို့ လက်​စွပ်​အသစ်​မှာပြီး လက်​ထပ်​လက်​စွပ်​ပြုတ်မကျရ​အောင်​ တွဲဖက်​ဝတ်​ဆင်​ထားရတယ်​လို့ သိရပါတယ်​။
Previous post မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မိခင်တွေထဲကတစ်ယောက်မို့ သက်ငယ်မုဒိမ်းမှုတွေကိုပြင်းထန်စွာအပြစ်ပေးရန်အူဝဲတောင်းဆို….
Next post ကလေးမွေးပြီး ၄၅ ရက်ဆိုရင်အတူနေလို့ရပြီလား မရသေးဘူးလား ဆိုတာ ……